#Odayaal, Maamulka Cagjar ku eedeysay in uu isir sifeyn ku hayo - Get Latest News From Horn of Africa
#Odayaal, Maamulka Cagjar ku eedeysay in uu isir sifeyn ku hayo
By axadle On Jun 13, 2019
Odayaal iyo waxgarad ku sugan Magaalada Shillaabo ee Gobolka Qorraxey ayaa Madaxeynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafe Cagjar iyo mas’uuliyiin ka mid ah maamulka ku eedeeyay in ay isir sifeyn ku hayaan beeshooda.
Odayaashan oo la soo xiriiray Idaacadda Mustaqbal ayaa sheegay in madaxa nabad gelyada ee Ismaamulka, midka SHillaabo, Maamulka Magaalada iyo Madaxweynaha Ismaamulka ay raalli ka yihiin dhibaatada lagu hayo mid ka mid ah Beelaha degan Ismaamulka.
Waxaa ay sheegeen in Madaxweyaha iyo maamulka Goholka Qorraxey ay wadaan in ay dadka kale ku beeraan degaannadooda iyagana xoog looga saarayo.
#Xukumadda oo sheegtay in doorashada Galmudug ka dhaceyso…
Ciidamada Liyuu Booliska ee Ismaamulka Soomaalida ayey ku eedeeyeen in ay beegsanayaan Beeshooda dhibaato iyaga u gaar ahna lagu hayo.
Mid ka mid ah Odayaasha ayaa sheegay in dhulkii iyaga laga barakiciyay la dejiyay Beesha uu ka soo jeedo Madaxweynaha islamarkaana degaan ay iyaga leeyihiin oo lagu magacaabo Gar Cillaan degmo loo aqoonsaday lana dejiyay dadka cusub ee Gobolka lagu beerayo.
Waxaa uu sheegay in Magaalooyinkoodii, Baraagihii ay biyaha ka cabayeen iyo dhul beeroodkoodiiba la geliyay cagaf lana baabi’iyay isaga oo ku eedeeyay in ay arrintaas ka wada warqabaan madaxda ugu sarreysa Ismaamulka Soomaalida.
Odaygan ayaa sheegay in warqado cabasho ah ay geeyeen Maamulka Gobolka Qorraxey, Ismaamulka Soomaalida ee fadhigiisu yahay Jigjiga iyo dowladda Federaalka ah ee Itoobiya,dhamaantoodna aysan waxba ka qaban Karin.
#Al-Shabab militants have been driven out of a strategic…
#Turkey’s opposition wins rerun of Istanbul mayoral…
20 hours ago 1,788,265
#Sudan military calls for joint AU, Ethiopia transition…
20 hours ago 7,495
#Mauritania ruling party’s Ghazouani wins presidency:…
20 hours ago 74,463
#Malawi parliament elects first ever female speaker
Jun 23, 2019 7,496
#Work harder to improve the well-being…
Jun 23, 2019 7,454,894
#Nin U Basaasayey Hay’adda Sirdoonka…
Jun 23, 2019 748,705
#Iran executes ‘defence ministry…
Jun 23, 2019 745,902